राजनीति – Page 372 – Halkaro
पत्याउनु हुन्छ ? प्रचण्डको सम्पती १ कठ्ठा र तीन तोला सुन मात्र ?
काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको चार महिनापछि बल्ल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले वाहालवाला मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीसहित ३१ जनाको सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरे पनि उनीहरुको जीवनशैली र सार्वजनिक सम्पत्तीमा विवरण प्रति भने आमजनता भने आश्वस्त हुने प्रकारको छैन। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहलको सम्पत्तीका […]
रूसी राष्ट्रपति पुटिन विश्वकै शक्तिशाली व्यक्ति
काठमाडौँ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विश्वकै शक्तिशाली व्यक्ति बनेका छन् । अमेरिकी पत्रिका फोब्र्सले प्रकाशित गरेको विश्वका १०० शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा पुटिन अगाडि छन् । भर्खरै मात्र टाइम्स म्यागेजिनले वर्ष व्यक्ति घोषित अमेरिकाका नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पछि पार्दै पुटिन विश्वका शक्तिशाली व्यक्ति बनेका हुन् । फोब्र्सको सूचीमा ट्रम्प दोस्रो स्थानमा परेका छन् […]
टर्कीमा किन थुनिइन माधव नेपाल पत्नी गायत्री ?
काठमाडौँ । तीन साताअघि टर्कीको इस्तान्बुल बिमानस्थलमा अपमानजनक तरिकाले २० घण्टा अध्यागमनको थुनामा परेकी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पत्नी गायत्री नेपाल अझै त्यस घटनाको पीडाले रन्थनिइरहेकी छन् । आफूमाथिको घटना संयोग या षड्यन्त्र जे पनि हुनसक्ने भन्दै उनले यथार्थ बाहिर नआएसम्म केहि नबोल्ने बताएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । मंसिर ११ देखि सुरु हुने […]
निर्वाचन गराउन तीन दल सहमत
प्रकाशित मिति : २०७३, २९ मंसिर बुधबार
काठमाडौँ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनको प्रस्तावले बनाएको राजनीतिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्दै निर्वाचनमा जान सकारात्मक भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वबीच सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि नबढाउने गरी निर्वाचनमा जाने सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर […]
मेरो प्राथमिकता राष्ट्रसंघको सुधारः महासचिव गुटेरेश
न्यूयोर्क, मंसिर २८ । संयुक्त राष्टसंघका नवनियुक्त महासचिव एन्टोनियो गुटेरेशले आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारका लागि लाग्ने बताएका छन् । विश्वमा शान्तिको स्थापना, विकासका क्रियाकलापहरुको प्रवर्धनका साथै जलवायु परिवर्तनको असरबाट विश्व समुदायलाई बचाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारगरी यसलाई एक सशक्त संगठन बनाउनेतर्फ आफू लाग्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । सोमबार बिहान राष्ट्रसंघीय महासचिव पदको सपथ […]
प्रमुख दलबीचको छलफल सकरात्मकः देशलार्इ निर्वाचनमा केन्द्रीत गराउने सहमति
काठमाडौँ, मंसिर २८ । सरकारले पाँच नं. प्रदेश टुक्र्याउने गरी ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा रहेको संसदको प्रमूख प्रतिपक्षी दल र सत्तारूढ दलहरूबीच मंगलबार विहान गतिरोध अन्त्यका लागि छलफल भएको छ । संसदका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का प्रमूख नेताहरुको बैठकमा दलीय सम्वाद जारी राख्दै सहमतिमै राष्ट्रिय समस्याहरुको […]
अलपत्र निर्वाचन कानुनः अन्यौलमा स्थानीय तहको निर्वाचन
प्रकाशित मिति : २०७३, २८ मंसिर मंगलवार December 15, 2016
काठमाडौँ, मंसिर २८ । सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भनिरहेको छ । तर पनि त्यसका लागि चाहिने कानुन नियमावलीहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा चैतमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन टर्दै गएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तथा नियमावली समयमा नै संसदबाट पास नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन अर्को वर्ष धकेलिने निश्चित जस्तै बनेको […]
प्रमुख दलबीच छलफल हुँदै
काठमाडौँ, मंसिर २८ । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बालुवाटारमा बस्दै छ । संविधान संशोधन, सदन सुचारु गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न लागेका हुन् । साढे ९ बजे बोलाइएको बैठकमा संविधान संशोधन, तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।